Kubuntu 14.04 တွင် TouchPad ကိုစီမံခန့်ခွဲရန် application အသစ်တစ်ခုရှိလိမ့်မည် Linux မှ
Kubuntu 14.04 တွင် TouchPad ကိုစီမံခန့်ခွဲရန် application အသစ်တစ်ခုရှိလိမ့်မည်
အသစ်စီမံခန့်ခွဲရန်လျှောက်လွှာအသစ် မင်္ဂလာပါ ပေါ်လာလိမ့်မယ် Kubuntu ၁၉.၁၀ ဒီသက်တမ်းတိုး interface ကို, options အများကြီးနှင့်ဤအစိတ်အပိုင်းကို Activate / Deactivate ဖို့သော့ကိုရှာ (သို့မဟုတ်သူတို့၏ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်ရှိသည်မဟုတ်သော) သောအသုံးပြုသူများအတွက် plasmoid နှင့်အတူ။
ဒီ application ကအဟောင်းကိုအစားထိုးလာပါတယ် Synaptiksနှင့်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုကျေးဇူးတင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် အလက်ဇန်းဒါး Mezin သူကသူ့အဘို့မိမိစီမံကိန်းကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ GSoC (Google နွေရာသီ၏ Code).
အသုံးပြုသူများသည် Kubuntu ၁၉.၁၀ package ကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့် Ubuntu repositories မှ application အသစ်ကိုသင် install လုပ်နိုင်သည် kde-touchpad။ ကျန်တဲ့သူများ၊ တခြား distros တွေကိုသုံးတဲ့သူတွေလည်းသုံးလို့ရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်😀
အရင်းအမြစ်: shadeslayer's Blog
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Kubuntu 14.04 တွင် TouchPad ကိုစီမံခန့်ခွဲရန် application အသစ်တစ်ခုရှိလိမ့်မည်
ကောင်းပါတယ်ဒါပေမယ့်ငါကငါ့ Debian XD ကိုစောင့်ရှောက်
ဝိုး! ဒါဟာ KDE-style, hyper configurable ဖြစ်လိမ့်မည်!
Ubuntu မှာသုံးခဲ့တဲ့ "tweak" ကိုငါမေ့သွားပြီ။
သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါ 14.04/XNUMX ရောက်လာဖို့စောင့်နေတုန်းပဲ။
KaOS တွင် Build ၌စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းကို "kde-touchpad-config" ဟုခေါ်သည်။
ထို့ကြောင့် Chakra နှင့် Arch 🙂
Firefox မှာကြော်ငြာရှိမယ်ဆိုတာမှန်သလား။ ကျနော်တို့အရာအားလုံးအကြောင်းကိုအဘယ်အရာကိုပိုပြီးသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းရှင်းပြပါ
KillSpinners - ဘယ်တော့မှမဖွင့်သောဆိုက်များအတွက် Firefox extension